Calendar 2014 “Town” Kalandrie - Famolavolana
Kalandrie Kitapo dia kitapom-panamboarana taratasy izay misy ampahany afaka mivory malalaka ao anatin'ny kalandrie. Mametraha trano amin'ny endriny samihafa ary ankafizo ny manangana tanàna kely anao manokana. Ny famolavolana kalitao dia manana fahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitry ny fiainana miaraka amin'ny Design.
Anaran'ny tetikasa : Calendar 2014 “Town”, Anaran'ny mpamorona : Katsumi Tamura, Anaran'ny mpanjifa : good morning inc..
Kalandrie Katsumi Tamura Calendar 2014 “Town”